Aplika sy tranonkala hihaino mozika - Torohevitra - TELES RELAY
Apps sy tranonkala hihaino mozika - Tips
By TELES RELAY On Jona 29, 2020
Inona ny WhatsApp? - Torohevitra
Afaka mahita olona misy WhatsApp ve isika? - Torohevitra
4 Dingana atao hitantanana ny trosa-nao - tsy manan-danja firy aminao ny vola
Vaovao farany amin'ny 28 Jun 2020 mankany 17: 07 feh Félix Marciano
Miaraka amin'ny na tsy misy famandrihana, mifanentana amin'ny mpanentana mifandray na tsia ... tolotrasa maro no manolotra hihaino ireo playlists tiany indrindra amin'ny findainy, tablette na solosaina. Ireto misy sehatra sy fampiharana.
Le streaming music dia efa mahazatra izao fahazarana izao. Misy sehatra maromaro, tena ofisialy, izay ahafahanao mihaino ny hira tianao indrindra ara-dalàna raha tsy manana CD ny vatanao. Ary ireo fampiharana na tranokala ireo dia hita amin'ny smartphones na takelaka, saingy tsy izany ihany. Afaka mampiasa fitaovana maro hafa koa ianao! Fanehoana ny vahaolana isan-karazany.
Mora ampiasaina sy mihaino offline
Miaraka amin'ny rindrambaiko isam-bolana amin'ny 9,99 € isam-bolana ary ny fampiasany mora foana, Spotify dia iray amin'ireo hira mavesa-danja indrindra. Ny serivisy ny serivisy, saingy tsy mifanaraka amin'ny fanaka dia tsy ilaina ny torolàlana maivana ary noho ny antony marim-pototra: miankina amin'ny fahatsorany ny sehatra. Tahaka ireo tolotra hafa, Spotify dia manolotra ny hira tiany indrindra na dia tsy misy fifandraisana aza. Ny fampiharana dia mifanaraka amin'ny tolotra hafa (toy ny mpandray feo na ny Playstation), ary nanambara ihany koa ny fampifanarahana amin'ny app Google Clock. Fotoana tsara hifoha amin'ny mozika amin'ny mozika ankafiziny ... na toro-hevitra avy amin'ny rindrambaiko. Fanamarihana: Manolotra famandrihana manokana ho an'ireo mpianatra sy fianakaviana ny Spotify.
Voninkazo maimaim-poana sy famandrihana hividianana fihainoana tsy misy fetra
Deezer dia iray amin'ireo "tranainy" tamin'ny fampitana mozika: efa nisy hatramin'ny fotoam-piasana hatramin'ny 2007, ary naorinan'ny Frantsay izy io. Manolotra kinova maimaimpoana ilay tranokala, misy lohateny voafetra isaky ny adiny sy dokambarotra. Fa koa ny dikan-karama amin'ny famandrihana, miaraka amin'ny fihainoana, podcast ary radio misy fetra, ny mety hihaino ny lisitry ny kilalaoo ivelany any ivelany (amin'ny alàlan'ny fisintonana azy ireo amin'ny rindranasa) sy ny fidirana amin'ny "alalàn'i" Deezer - io izany hoe pasitety nampidirina manokana araka ny tsiron'ny mpampiasa. Deezer dia mifanentana amin'ny fahitalavitra mifandray, fampiononana lalao ihany koa.
Mamorona playlists, mihaino azy an-tserasera ... na offline
Voalohany, ny fifanakalozana fifanakalozana mozika peer-to-peer, Napster dia sehatra ara-dalàna tanteraka ho an'ireo tia mozika. Tahaka an'i Deezer, izy dia manome fahafahana miditra amin'ny lisitry ny famoaham-peo manontolo (9,99 € isam-bolana, toa an'i Deezer sy Spotify). Azonao atao ny mamorona ny sangan'asanao, ary mameno ny lalanao tianao indrindra mba hihaino azy ireo na dia tsy misy offline aza. Amin'izao fotoana izao, ny Napster dia tsy mbola mifanojo mifanaraka amin'ireo mpikirakira mifatotra, fa azo atao kosa ny mampiasa ny app Sonos mba hanaovana ny rohy. Tsara ho an'ireo mpampiasa mivezivezy amin'ny serivisy samihafa: Napster dia manolotra a playlists converter.
YouTube ihany koa manomboka ny famandrihana mozika malaza
Iray amin'ireo zandriny indrindra amin'ny tsena mozika an-tserasera: YouTube Music dia manolotra fampiharana (finday sy Desktop) mba hidirana amin'ny katalaogy iray manontolo, tsy misy dokam-barotra ary miaraka amin'ny famandrihana premium. Tahaka ny tolotra hafa, YouTube Music dia manolotra playlists and trends. Ny famandrihana dia ny 9,99 € isam-bolana toy ny hafa, miaraka amin'ny telo volana maimaim-poana sy ny tolotra fianakaviana marobe. Nisy fiaraha-miasa tamin'i Sonos vao nambara, ary mifanaraka amin'ny app's Clock Clock.
Tehirizo ny hirao manokana ary midira amin'ny katalaogy an-tserasera
Always 9,99 € isam-bolana toy ny tolotra hafa, ary ny kaonty goavana amin'ny Google hafa: Google Play Music dia hanintona ireo mpampiasa aterineto izay efa mampiasa ny vokatra amin'ny Amerikana goavana mora kokoa. Ny Google Play Music dia manome ampahany amin'ny tolotra maimaim-poana azony, fa indrindra ny tolotra karama izay manan-danja kokoa amin'ny safidy malalaka, loharano ary fihainoana ivelan'ny aterineto. Amin'ny voalohany, ny serivisy dia mivoatra kokoa mba hanamorana ny fitehirizana azy manokana.
Nivoaka voalohany ity lahatsoratra ity CCM
TELES RELAY 15894 Lahatsoratra 0 hevitra
Paris Jackson: ny tsiambaratelo mampihetsi-po mampihetsi-po momba ny mpivady sy ny lasa teo amin'ny fomba feno herisetra
Famotehana an'ny fanjakana amin'ny sakafo haingana dia maty ny rehetra mandritra ny fanidy - BGR
Ahoana ny fomba hanoratanao bold na italiana amin'ny WhatsApp - toro-hevitra
XNXX: toerana 6 hizaha toetra mandritra ny fanalefahana
XNXX: toro-hevitra 3 mba hahagaga ny mpiara-miasa am-pandriana
XNXX: boky 3 hahalala ny zava-drehetra momba ny firaisana
XNXX: toro-hevitra 3 hanadino ny fitiavanao voalohany
XNXX: Ny lesona tadiavin'ny mpangalatra amin'ny andiany TV ankafizinay
Marc-Vivien Foé Loka 2020: Nizeriana Victor Osimhen voafidy ho mpilalao…
Ity ny fomba nataon'i Bruno Fernandes ny afovoan-tany portogey…
Fihenjana ny fifandraisana eo amin'i Manchester City sy Leroy Sane
Kamerona: Manaiky i Brenda Biya fa manana toerana malefaka ho an'i Locko ary mikasa ny…
Karim kintan'ny Real Madrid, tamin'ny fitsarana
Prev Manaraka 1 amin'ny 9